Ogaden News Agency (ONA) – Xaalada Dalka Kenya Doorashadii Madaxtinimada Kadib.
Xaalada Dalka Kenya Doorashadii Madaxtinimada Kadib.
Waxaa si tartiib ah caadi ugu soo laabanaya noolasha deegaannada uu ku xooggan yahay mucaaradka Kenya, gaar ahaan xaafado ka tirsan Kisumu iyo Nairobi, ka dib rabshadihii ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay.
Hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, oo shalay la hadlay dadka xaafadda isku raranka ah ee Kibera, ayaa ugu baaqay in aanay shaqa tegin, asagoo baaqaasi sabab uga dhigay waxa uu ku tilmaamay doorashadii looga shubtay iyo arxan darro uu ku eedeeyay booliska.
Dhanka kale caasimadda Nairobi ayaan u saxmad badneyn sidii looga bartay maalmaha Isniinta ah, taasoo ka dhigan in dadka qaar aanay weli shaqooyinka ku laaban. Magaalo xeebeedka Mombasa ayaa waxaa laga soo warramayaa in noolashu caadi kusoo laabatay, inkastoo ay tahay meel uu taageero badan ku leeyahay isbahaysiga mucaaradka ah ee NASA.
Raila Odinga ayaa ku doodaya in looga shubtay doorashadii Kenya ka dhacday 8-dii bishan, inkastoo eedeyntaasi ay beeniyeen gudiga doorashooyinka iyo korjoogayaasha shisheeye ee madaxa bannaan. Haseyeeshee booliska Kenya ayaa lagu eedeeyay in awood xad dhaaf ah ay u adeegsadeen dad ka mudaharaadayay natiijada doorashada, rabshadahaasi oo dad ku dhinteen.